Duqa Muqdisho oo ka hadlay qaabka loo qeybinayo shaqaaleysiinta 1,000 dhalinyaro oo Muqdisho kunool – dulmidiid
August 14, 2017 Warka No comments
Duqa Muqdisho oo ka hadlay qaabka loo qeybinayo shaqaaleysiinta 1,000 dhalinyaro oo Muqdisho kunool
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay qaabka ugu haboon uu maamulka gobolka u qaadan doono ilaa 1, 000 Dhalinyaro oo la filayo in shaqooyin kala duwan laga siiyo gobolka Banaadir.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaab degmno lagu soo xuli doono laguna qaadan doono dhalinyarada shaqada laga siinayo gobolka, waxa uuna tilmaamay in shaqaaleesiinta loo mari doono si cadaalad ah .
Waxa uu sheegay Taabid Cabdi Maxamed in dhalinyarada la qaadanayo lagu tix galin doono aqoonta iyo kartida ay leeyihiin, waxa uuna intaa raaciyay in shaqadan loo sinaan doono gabdho iyo Wiilal ayna ku qaadan doonaan si cadaalad ah oon mugdi ku jirin.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho oo ah nin dhalinyaro ah ayaa u muuqda mid ka fir fircoon Gudoomiyaashii hore, waxaana lagu amaanaa Gudoomiyaha gobolka in uu mar walbo taageero garabna siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo habeen kahor ka hadlay Munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada Aduunka ayaa ugu baaqay Maamulka gobolka Banaadir in ay Shaqo u abuuraan ilaa Kun Dhalinyaro